चाणक्य नीति: यी ३ प्रकारका मानिससँग सधै टाढा हुनुहोस् ! | सुदुरपश्चिम खबर
आचार्य चाणक्यले बनाएका नीति आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक र बहु उपयोगी छन् । जो कसैले पनि चाणक्यको नीतिशास्त्रमा बताइएका नीतिको सही तरिकाले पालना गरेमा जीवनमा सबै प्रकारका सुख–सुविधा र सफलता प्राप्त गर्न सक्छ ।
१. कविसँग सधै सावधान रहनुः हामी मध्ये धेरैले सुनेका छौ एउटा भनाई, जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छ कवि । यसको मतलव सुर्यको रोशनी पनि नपुग्ने स्थानमा कविको सोच पुग्छ । उसले आफ्नो कविताको माध्यमबाट धेरै ठुला कुरा पनि सजिलै गर्न सक्छ । यसकारण चाणक्यले भनेका छन्, कविसँग भुलेर पनि दुश्मनी मोलन हुँदैन ।
२. ज,ड्याहा व्यक्तिसँग सधै सावधानः जो व्यक्ति सधै र,क्सीको नशामा डुब्छ उसँग कहिल्यै पनि मित्रता राख्नु हुँदैन । नशामा हुँदा उसले आफ्ना सबै मर्यादा भुल्छ । मनमा आएको कुरा बोल्छ । यसैले चाणक्यले यस्ता व्यक्तिसँग सधै टाढा बस्नु भनेका छन् ।
३.जबरजस्त गर्ने महिलाबाट सावधान रहनुः आचार्य चाणक्यको अनुसार पुरुषको तुलनामा महिलाहरुमा जबजस्तपन बढी हुन्छ । महिलाको जबजस्तको कारण पुरुषले यस्तो काम पनि गर्न सक्छन् जुन काम पुरुषले सोच्न पनि सक्दैन । यसकारण महिलाको कारणले व्यक्ति ठुलो संकटमा पनि पर्न सक्छ ।